ओली र देउवामा प्रधानमन्त्रीको बाजी कसले मार्ला ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
ओली र देउवामा प्रधानमन्त्रीको बाजी कसले मार्ला ?
थाहा अनलाइन May 21, 2021 मा प्रकाशित
काठमाडौं । राष्ट्रपतिले आह्वान गरेअनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि दुई पक्षले दावी प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः सरकारका लागि दावी गर्दै १५३ सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका छन् भने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद जयकुमार राईले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदको सूचीमा आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका छन् ।
सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद राईले आफू एमालेको सांसद रहेको र आफ्नो अध्यक्षको विरुद्धका विपक्षी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी कुनै हस्ताक्षर नगरेको उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
माधव नेपाल पक्षका राई वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन भने अनुपस्थित रहेका थिए । पहिलेकै हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको उनले बताएका छन्